ခါးနာတိုင်း ခွဲစိတ်ရန်မလိုပါ - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
ဒီဇင်ဘာ 16, 2017 Prof.Emeritus Charoen Chotigavanich, M.D.
“ငါခါးနာနေတာကြာပြီ၊ဒါပေမဲ့လေ ငါဆရာဝန်နဲ့သွားမပြချင်ဘူး ဘာလို့လဲဆိုတော့ ခွဲခန်းဝင်ရမှာကြောက်တယ်”
တကယ်တမ်းမှာခွဲရမှာကြောက်ပြီးခါးနာတာကိုသေသေချာချာမကုသပဲ ရှောင်ရှားနေခြင်းသည်သာရောဂါအခြေအနေကိုပိုဆိုးဝါးစေတာပါ။ ရှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းသောခါးနာဝေဒနာဟာ ဆေးသောက်ခြင်း လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းများနဲ့ ပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်။သို့သော်ခါးနာဝေဒနာရှင်တော်တော်များများဟာ ခွဲစိတ်ကုသရမယ်လို့ တထစ်ချယုံကြည်ထားကြပါတယ်။ ဒီလိုမှားယွင်းတဲ့ခံယူချက်များကြောင့် ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ဖို့ကို ရွှေ့ဆိုင်းတတ်ကြပြီးရောဂါအခြေအနေဆိုးမှာသာ ဆရာဝန်ဆီ စစ်ဆေးခံဖို့ ရောက်လာပါတော့တယ်။
နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှု၊အမူအကျင့်များအပေါ်မူတည်ပြီးခါးနာရခြင်း အကြောင်းရင်းမှာ တဦးနှင့်တဦးမတူညီနိုင်ပါ။ ယခင်က ခါးနာဝေဒနာဟာ အသက်အရွယ်ကြီးလာခြင်း၊အချိန်အတော်ကြာ လုပ်ကြမ်းလုပ်ရခြင်း၊ အလေးအပင်များမရခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီနေ့မှာတော့ အသက်အရွယ်ငယ်သော လူငယ်များတွင်လည်း မကြာခဏဆိုသလို တွေ့မြင်နေရပါတယ်။ အကြောင်းမှာ ကွန်ပျူတာရှေ့အချိန်ကြာမြင့်စွာ ထိုင်နေရခြင်း၊ ဖုန်းများကို ခေါင်းငိုက်စိုက်အနေအထားဖြင့် ကြာရှည်စွာသုံးခြင်း၊ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု အားနည်းခြင်း၊တီဗွီကြည့်လျှင်လှဲအိပ်ကြည့်ခြင်း၊ ထိုင်သည့်ပုံစံမမှန်ခြင်း စသည့် အကျင့်ဆိုးများဟာ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ခါးနာခြင်းရဲ့ အကြောင်းတရားများဖြစ်ပါတယ်။
ခါးနာဝေဒနာတိုင်းခွဲစိတ်ရန်လိုသည်ဟု အထင်မမှားစေချင်ပါ။ ခါးရိုးတွင်းရှိအာရုံကြောမကြီး ညပ်ပြီးရောဂါလက္ခဏာ ပြင်းထန်မှသာ ခွဲစိတ်ရန်လိုတတ်ပါတယ်။ခါးနာဝေဒနာအများစုဟာ ခွဲရန်မလိုပဲ ဆေးစား လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင်းနှင့်နှစ်ပတ်၊သုံးပတ်အတွင်း သက်သာ သွားတတ်ပါတယ်။ သို့သော်သက်သာသွားသည်နှင့်အမူအကျင့်များပါ ပြင်သွားရန်လိုအပ်ပါတယ်။ အထိုင်များခြင်း၊ ဖုန်းကို ခေါင်းငိုက်စိုက်ကြည့်ခြင်းများစသည့်မကောင်းသော အမူအကျင့်များကို ပြင်ဆင်ခြင်းမရှိပါက နာတာရှည် ခါးနာဝေဒနာစွဲကပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကွန်ပျူတာကြာရှည်သုံးရသော ရုံးသမားများအနေဖြင့် တနာရီ တခါ လမ်းခဏလျှောက်ပေးခြင်း၊ ကိုယ်အကြောဆန့်ခြင်းများ၊ ကွန်ပျူတာနှင့် အဝေးသို့ ကြည့်ပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးပါ။
တီဗွီကြည့်လျှင် မှန်ကန်သောအနေအထားဖြင့် ထိုင်ပြီးကြည့်ပါ။
ဖုန်းကို ခေါင်းငို်က်စိုက်မကြည့်ရ။ မျက်စိနှင့် တပြေးညီအနေအထားနှင့် ကြည့်ပါ။
ခါးရိုးဆစ်ကျွံကာ အာရုံကြောမကြီးပိနေသော လူနာများတွင်တော့ ခွဲစိတ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ယင်းလူနာများတွင် ခါးနာဝေဒနာပြင်းသည့်အပြင် ခြေထောက်တောက်လျှောက်ထုံကြဉ် ကိုက်ခဲခြင်း၊ လမ်းလျှောက်ရ ခက်ခဲလာခြင်း တို့ကို ခံစားရတတ်ပါတယ်။ခါးဆစ်ရိုးတီဘီဝေဒနာရှင်များတွင်လည်း ရောဂါကြောင့် ခါးဆစ်ရိုးပျက်စီးပြီး အာရုံကြောများ ထိခိုက်သွားပါက ခွဲစိတ်ရတတ်ပါတယ်။
အချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ခါးနာတိုင်းခွဲစိတ်ကုသရန်မလိုပါ။ ခွဲစိတ်ရမှာကြောက်ပြီး စစ်ဆေးကုသရန် နှောင့်နှေးမှသာလျှင် အပ်နဲ့ပေါက်ရမှာကို ပုဆိန်နှင့်ထွင်းနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ခါးနာပြီဆိုတာနဲ့ ဆရာဝန် နဲ့ဆွေးနွေးရန်မကြောက်ပါနဲ့လို့တိုက်တွန်း ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။
Prof. Emer. Charoen Chotigavanich, MD
Specialist in Spinal and Orthopedic Surgery
Former President of the Asia Pacific Orthopedic Association (APOA)
M.D., Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, 1961.
အမည် (သင်၏ ပတ်စပို့ သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်ပါ အမည်အတိုင်း)*
ရွေးချယ်ပါAfghanAlbanianAlgerianAmericanAndorranAngolanAntiguansArgentineanArmenianAustralianAustrianAzerbaijaniBahamianBahrainiBangladeshiBarbadianBarbudansBatswanaBelarusianBelgianBelizeanBenineseBhutaneseBolivianBosnianBrazilianBritishBruneianBulgarianBurkinabeBurmeseBurundianCambodianCameroonianCanadianCape VerdeanCentral AfricanChadianChileanChineseColombianComoranCongoleseCosta RicanCroatianCubanCypriotCzechDanishDjiboutiDominicanDutchEast TimoreseEcuadoreanEgyptianEmirianEquatorial GuineanEritreanEstonianEthiopianFijianFilipinoFinnishFrenchGaboneseGambianGeorgianGermanGhanaianGreekGrenadianGuatemalanGuinea-BissauanGuineanGuyaneseHaitianHerzegovinianHonduranHungarianI-KiribatiIcelanderIndianIndonesianIranianIraqiIrishIsraeliItalianIvorianJamaicanJapaneseJordanianKazakhstaniKenyanKittian and NevisianKuwaitiKyrgyzLaotianLatvianLebaneseLiberianLibyanLiechtensteinerLithuanianLuxembourgerMacedonianMalagasyMalawianMalaysianMaldivanMalianMalteseMarshalleseMauritanianMauritianMexicanMicronesianMoldovanMonacanMongolianMoroccanMosothoMotswanaMozambicanNamibianNauruanNepaleseNew ZealanderNicaraguanNigerianNigerienNorth KoreanNorthern IrishNorwegianOmaniPakistaniPalauanPanamanianPapua New GuineanParaguayanPeruvianPolishPortugueseQatariRomanianRussianRwandanSaint LucianSalvadoranSamoanSan MarineseSao TomeanSaudiScottishSenegaleseSerbianSeychelloisSierra LeoneanSingaporeanSlovakianSlovenianSolomon IslanderSomaliSouth AfricanSouth KoreanSpanishSri LankanSudaneseSurinamerSwaziSwedishSwissSyrianTaiwaneseTajikTanzanianThaiTogoleseTonganTrinidadian or TobagonianTunisianTurkishTuvaluanUgandanUkrainianUruguayanUzbekistaniVenezuelanVietnameseWelshYemeniteZambianZimbabwean
မည်သည့်အထူးကုမဆိုChildEyePsychiatrySkinBrainHealth Check-upRehabilitationSurgery & Plastic SurgeryFemale reproductive systemEar Nose ThroatBone & SportGeneral MedicineBlood and CancerGut, LiverJoint & AutoimmuneThyroid, Pancrease, and other glands InfectionKidneyAllergy & ImmunologyLungHeartTooth & GumUrologistOthers
ဆေးရုံများအားလုံးSamitivej SukhumvitSamitivej SrinakarinSamitivej ThonburiSamitivej SrirachaSamitivej International Clinic
ရက်ချိန်းနေ့စွဲ − ပထမဦးစားပေး*
မဆိုအချိန်07:00 - 07:2907:30 - 07:5908:00 - 08:2908:30 - 08:5909:00 - 09:2909:30 - 09:5910:00 - 10:2910:30 - 10:5911:00 - 11:2911:30 - 11:5912:00 - 12:2912:30 - 12:5913:00 - 13:2913:30 - 13:5914:00 - 14:2914:30 - 14:5915:00 - 15:2915:30 - 15:5916:00 - 16:2916:30 - 16:5917:00 - 17:2917:30 - 17:5918:00 - 18:2918:30 - 18:5919:00 - 19:2919:30 - 19:59
ရက်ချိန်းနေ့စွဲ − ဒုတိယဦးစားပေး*
Samitivej ဆေးရုံတွင် လူနာအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ထားဖူးပါသလား။
သင်၏ ဆေးရုံမှတ်ပုံတင် အမှတ် (HN) မည်သည်ဖြစ်ပါသလဲ။
ဟုတ်ကဲ့၊ Samitivej ဆေးရုံမှ ကျန်းမာရေးသတင်းများနှင့် အကြံပြုချက်များ ရယူလိုပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Samitivej ဆေးရုံကြီးတည်နေရာများနှင့် ပတ်သက်. လေ့လာပါ
သင်၏ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ အပြည့်အစုံ
သင်၏ ဆေးရုံကို ရွေးချယ်ပါ*
မည်သည့်ဆေးရုံမဆိုSamitivej SukhumvitSamitivej SrinakarinSamitivej ThonburiSamitivej SrirachaSamitivej ChonburiSamitivej Children's HospitalSamitivej International Clinic
သင်၏မေးခွန်း သို့မဟုတ် မှတ်ချက်ကို ကျေးဇူးပြု၍ မျှဝေပါ*
ဆမ်မီတဝေ့ဆေးရုံမှ ဝန်ထမ်းများကို သိလိုသောမေးခွန်းမေးရန်